Ngwa gam akporo 11 kacha mma: Otu esi enweta ha na ekwentị ọ bụla 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Google, dị ka afọ ọ bụla, na-emelite sistemụ arụmọrụ gam akporo ya na-ewebata ọtụtụ ihe ọhụụ na-atọ ụtọ ma na-achọpụta ọrụ niile a hụrụ na mbipụta ndị gara aga, iji were ahụmịhe onye ọrụ na ọkwa ọhụrụ wee lụọ ọgụ na ndoro-ndoro ya na oge niile, iOS. Usoro nyocha maka iPhones na asọmpi na-arịwanye elu na nhazi akụkụ).
Ọ bụrụ na anyị enweghị ike inye gam akporo 11 nwalee ozugbo ma ụdị ọhụụ ahụ masịrị anyị, ị bịarutela ntuziaka ziri ezi - lee, anyị ga-egosi gị n'ezie. atụmatụ kachasị mma ewepụtara na gam akporo 11 na, iji mee ka o zuo ezuo, anyị ga-egosikwa gị esi nweta otu atụmatụ na ihe ọ bụla gam akporo ama, yabụ na ịkwesighi ịzụta Google Pixel ọzọ ma ọ bụ chere ka gam akporo 11 bịarute na ekwentị ndị ọzọ.
G ALKWUO: Wụnye Android 11 na Windows 10
Ntuziaka ntuziaka gam akporo 11
Dị ka e kwuru na mmeghe, n'isiakwụkwọ ndị na-esonụ, anyị ga-egosi gị ihe bụ ihe ọhụụ dị mkpa enwere ike ịchọta na ụdị 11 nke sistemụ arụmọrụ gam akporo yana, maka atụmatụ ọ bụla, anyị ga-egosikwa gị otu ị ga-esi nweta ya na ekwentị ọ bụla gam akporo nwere ma ọ dịkarịa ala mbipute 7.0.
Nwa Oge ikikere maka ngwa
Otu n'ime ihe ndị kasị mkpa nche ọhụrụ na gam akporo 11, na ikikere nwa oge- Mgbe ngwa jụrụ anyị maka ikike, enwere ike ịnye ya nwa oge rue mgbe emechiri ngwa ahụ; nke a ga-enye anyị ohere nye ikikere dị oke mkpa naanị maka obere oge, na-enweghị atụ egwu na ngwa ahụ nwere ike iji ya mee ihe ọzọ mgbe anaghị eji ya ma ọ bụ mgbe ogologo oge ọrụ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ iwebata ọrụ a na nke ọ bụla gam akporo (wepụtara na 2 ikpeazụ ma ọ bụ 3 afọ na gam akporo 7 ma ọ bụ karịa) naanị budata ngwa ahụ Iji ike emegbu mmadụ, dị maka n'efu na Playlọ Ahịa Google ma nwee ike dochie usoro ikikere nke ewuru na gam akporo, iji nwee ike ịnye ikikere nke obere oge (anyị nwekwara ike inye ikike maka oge ụfọdụ, yana ịkwụsị gị imechi ngwa ahụ).
Ugboro ole ka o mere anyị imechi ngosi site na mmeghe na anyị aghọtaghị ngwa ọ na-ezo aka? Na gam akporo 11 nsogbu a meriri, ebe ọ bụ na enwere otu akụkọ ihe mere eme nke gosipụtara na ekwentị, yabụ ị nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa ma ọ bụ ghọta ozi a agụbeghị.
Iji nwee ike iwekota ngosi ngosi na ihe ọ bụla gam akporo ama, nanị ibudata ngwa Gwa onye nlekọta ahụ, dị maka n'efu na Playlọ Ahịa Google ma nwee ike iwebata atụmatụ a ọbụna na ekwentị ndị ochie (nkwado kacha nta bụ gam akporo 4.4).
Na gam akporo 11 anyi nwere ike mechaa dekọọ ihe niile na-eme na ihuenyo site na ekwentị anyị (ịmepụta ntuziaka ma nye aka) nwere ike na-edekọ ọdịyo site na igwe okwu arụpụtara, yabụ na ịkwesighi iji ngwa ndị ọzọ.
Ebe ọ bụ na ruo mgbe gam akporo 10 a nwere ike nweta ọrụ a naanị site na ngwa ahụ, anyị hụrụ ọtụtụ ndị ọzọ iji dekọọ ihuenyo ọbụlagodi na ekwentị ndị toro eto; maka nke a anyị na-akwado ka ị budata ngwa ahụ Onye na-edekọ ihuenyo AZ, dị maka n'efu na Playlọ Ahịa Google.
Bolle per le chat (nkata egosipụta)
Na gam akporo 11, otu n’ime ihe ndi kacha ewu ewu na Facebook Messenger ka esi webata n’usoro sistemụ, ya bu ihe ngosi nkata (Ikuku egosipụta); anyị nwere ike ha nata ọkwa ma zaghachi chats mgbe ị na-eji ngwa ọzọdị ka ha ga-apụta dị ka overlapping egosipụta (nke ị pịa ịzaghachi).
Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji ọrụ a na ekwentị ọ bụla, jiri ya Facebook ozi (dị n'efu na Playlọ Ahịa Google) ma ọ bụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbatị ya na ngwa niile, tụkwasị ngwa dịka DirectChat, dịkwa maka n'efu na Playlọ Ahịa Google.
N'ime ihe ọhụrụ ndị a na-akpọ gam akporo 11, anyị na-ahụkwa usoro njikwa ngwa ngwa nke multimedia: mgbe anyị mepere Spotifty, YouTube ma ọ bụ ngwa ndị yiri ya, a Ndenye ego window ozugbo si gam akporo dobe menu, na-esote ntọala ngwa ngwa.
Anyị nwere ike iwebata arụmọrụ a na ekwentị ọ bụla gam akporo site na ịwụnye ngwa dịka Onyunyo ike, dị maka n'efu na Playlọ Ahịa Google ma nwee ike ịhazi oke ịhazi maka ogwe ngosi na maka ihuenyo na ụzọ mkpirisi ngwa ngwa.
Mee atụmatụ ọnọdụ ọchịchịrị
Ọ bụ ezie na ọrụ a abụghị ihe ọhụụ (ọ dị ugbu a dịka ọmụmaatụ n'ọgbọ ọhụrụ Samsung), Google agbanweela yana yana gam akporo 11 ọ na - enye gị ohere nhazi oge nke ọchịchịrị ma ọ bụ ọnọdụ gbara ọchịchịrị, i nwere ike ime ya eme n’abalị ma ọ bụ n’oge ọ bụla ọzọ n’ụbọchị
Ọtụtụ ngwa dị ugbu a na-enye gị ohere ịme atụmatụ ọnọdụ gbara ọchịchịrị (ma ọ bụ ọnọdụ gbara ọchịchịrị), dịka a hụkwara na ntuziaka ahụ Esi rụọ ọrụ ọchịchịrị na gam akporo na iOS ngwa; ma ọ bụrụ na anyị chọrọ atụmatụ a mode maka dum usoro, anyị pụrụ ịtụkwasị obi ngwa dị ka Ọnọdụ gbara ọchịchịrị, dị maka n'efu na Playlọ Ahịa Google.
Ọ bụ ezie na atụmatụ ndị a ga-eme akụ nke Pixels ọhụrụ na ngwaọrụ niile ga - enwe Android 11 dị ka sistemụ arụmọrụ, ọ pụtaghị na ndị ọrụ nwere ụdị nke gam akporo gara aga ga-ahapụrịrị! Site na ngwa ndị anyị kwadoro, anyị nwere ike irite uru zuru oke site na atụmatụ ndị na-adọrọ mmasị nke gam akporo 11 na-enweghị ịzụta Google Pixel ma ọ bụ ekwentị ọhụụ ọ bụla ejiri gam akporo 11 tinye.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ inweta gam akporo 11 ọhụrụ ọ bụla akwụ ụgwọ, anyị na-atụ aro ka ị gụọ ntuziaka anyị Mmelite gam akporo: onye dị ngwa n'etiti Samsung, Huawei, Xiaomi na ndị nrụpụta ndị ọzọ? mi Lelee maka mmelite na Huawei, Samsung na gam akporo igwe.